network protocol basics uye terminologies
Kuru Chengetedzo Network Protocol Basics uye terminologies
Network Protocol Basics uye terminologies
Iyi posvo inopa muongororwo wema network protocols uye inovhara mamwe akajairika network protocol terminologies nemienzaniso.
Tsananguro ye 'protocol' inosiyana zvakanyanya, asi kungoisa, protocol ingori a seti yemitemo .
Mukubatana, zvibvumirano zvinoreva zviyero zvepamutemo uye marongero anotsanangudza matauriro maviri kana anopfuura maturusi pane network.
Basics yeNetwork Kutaurirana
Kuti netiweki ivepo, tinoda hushoma hwezvinhu zviviri zvakabatana.
Kutaurirana kwenetiweki kunoitika pamatanho akasiyana kana zvidimbu (OSI modhi uye TCP / IP modhi)
Yese yega netiweki yekutaurirana kutaurirana inoitisa kupfuudza iyo ruzivo kune inotevera dura mudura.
Dhata yakaendeswa pakati pezvikamu inozivikanwa seProtocol Dhata Yuniti (PDU).
Aya maratidziro akaturikidzana ekutaurirana anotendera zvirinani kugadzirisa matambudziko.
Kumuka kweinternet uye tekinoroji nyowani zvachinja mataurirwo emidziyo neumwe uye nekudaro zvingangoda maprotocol matsva.
Network Protocol terminologies
LAN: LAN inomirira 'Local Area Network' uye inoreva kunetiweki isingagonekwe neruzhinji neinternet. Mienzaniso yeiyi imba kana hofisi network.
VAN: WAN inomirira 'Wide Area Network' uye kazhinji inoreva kune makuru akaparadzirwa manetwork uye, zvakanyanya, internet.
ISP: ISP inomirira 'Internet Service Provider' uye inoreva kambani inobata kukupa mukana wekuwana internet.
HUSIKU: Network Kero Dudziro inobvumidza zvikumbiro kubva kunze kwenzvimbo yako yemunharaunda kuti zvionekwe kumidziyo mukati mekwako netiweki.
Firewall: Iyo firewall chidimbu chehardware kana software iyo inosimbisa iyo mhando ye network network iri uye isingatenderwe. Izvi zvinowanzoitwa nekumisikidza mitemo yekuti madoko anofanirwa kuwanikwa kunze.
Router: A router idhijitari chishandiso chine chinangwa chikuru kuendesa dhata kumashure nekudzoka pakati pemasaiti akasiyana. Ichi chishandiso chinobvumira zvikumbiro kuti zviitwe kune internet uye kuti ruzivo rwutumirwe kumashure kune zvishandiso pane yemuno network.
Chinja: Basa rekutanga re switch ndere kupa mukana pakati pezvigadzirwa pane yemuno network. Muenzaniso switch yeEthernet.
Network inowanikwa: Ichi chikamu chinokutendera kuti ubatanidze kune yeruzhinji kana yakavanzika network. Inopa iyo software inodiwa kushandisa network yemahara. Muenzaniso weiyi ndeye Network Interface Makadhi (NICs).
Chiteshi: Chiteshi chinotsanangurwa zvine hungwaru nzvimbo yekubatanidza. Zviteshi zvengarava zvinopa nzvimbo yekupedzisira yekutaurirana uye kuendesa data. Iwo madoko anotangira pa0 kusvika 65535.
Rongedza: Paketi ndicho chinhu chekutanga che data chakatumirwa pamusoro penetiweki. Paketi ine musoro unopa ruzivo nezve iyo packet (sosi, kwainoenda, nezvimwewo) uye muviri kana mubhadharo une data chairo riri kutumirwa.
Mune ino posvo, isu takafukidza izvo zvekutanga zvemambure maprotocol uye zvakajairika terminologies. Takakurukura kuti chii chinonzi protocol uye nemidziyo inotaurirana kune imwe netiweki, padanho repamusoro.
mitambo senge super mario kumhanya
isina kukiyiwa iphone nhema yechishanu madhiri 2016
AMOLED Burn-in Fixer inovimbisa kugadzirisa kuri nyore kune yako Android smartphone screen & apos; s pesky yekutsva-mumatambudziko
Kanganwa Super Mario Run, heano gumi makuru mamwe maApple eApple neIOS ayo ari kunakidza
Iyo Typist inoedza kuti ungamhanyisa sei kunyora pa smartphone yako
Yakagadziridzwa Boingo Wi-Finder app yeIOS inoita kuti zvive nyore kuburitsa nzvimbo dzinopisa
Maitiro ekusa-sync iyo yekuvhura nhoroondo pane yako iPhone kubva kune yako iPad kana zvimwe iDevices
Nyowani Samsung flash kutengesa: Sevha hombe pane iyo S10 512 GB
Adobe Photoshop Express yeApple ikozvino inoita kuti iwe uwedzere mafuremu, miganhu, uye gadzirisa girini pet maziso
Wepamusoro gumi Akavhurwa Sosi Performance Kuedza Maturusi